5 ဥရောပမှာတော့ကလေးများသည်အကောင်းဆုံးဆွဲဆောင်မှုများ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား >5ဥရောပမှာတော့ကလေးများသည်အကောင်းဆုံးဆွဲဆောင်မှုများ
ကလေးတွေနှင့်အတူခရီးထွက်ဖြစ်စေမယ့်အိပ်မက်ဆိုးသို့မဟုတ်သင့်အသက်တာ၏အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်. ကျွန်တော်တို့သူငယ်များ '' တောင်းဆိုနေတာသဘာဝနှင့်သူတို့ကိုလုပ်ကြဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒမှကျေးဇူးတင်ပါသည်, အဘယ်သူမျှမအလယ်မြေပြင်ကိုများသောအားဖြင့်လည်းမရှိ. သို့သျောလညျး, သငျသညျကိုယျအဘို့ပိုလွယ်ကလေးများနှင့်အတူခရီးသွားလုပ်ဘို့နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်. ထိုသို့ပြုမှအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းလူငယ်တွေကိုအမြဲလုပ်ဖို့တစ်ခုခုရှိသည်သို့မဟုတ်တွေ့မြင်သေချာစေရန်ဖြစ်ပါသည်. သငျသညျကိုသိမ်းပိုက်သူတို့ကိုစောင့်ကူညီရန်, ကျနော်တို့စာရင်းတစ်ခုပြုစုပါတယ်5ဥရောပတိုက်တွင်လေးတွေများအတွက်အကောင်းဆုံးဆွဲဆောင်မှု. သင်အလွယ်တကူကဤခရီးစဉ်ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ် ရထားနဲ့. ကြည့်ကြပါစို့:
အီတလီကမ်းလှမ်းသည် ကြုံနေရလျှင်ကလေးတွေများအတွက်အနည်းငယ်စိတ်ကူးဆွဲဆောင်မှု သမိုင်းဝင် မြင်ကွင်းများကသူတို့ကို excite ပါဘူး. တွင် Viserba အပန်းဖြေပန်းခြံ, သူတို့သေးသေးလေးထဲမှာအီတလီ၏မြင်ကွင်းများကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်! အဆိုပါပန်းခြံကိုလည်းစိတ်ရွှင်လန်းသွားလာရင်း-ပတ်ပတ်လည် features, ကစားကွင်း, အမျိုးမျိုးသောစီး, ကာရုပ်ရှင်ရုံ. တစ်နည်းအားဖြင့်, သင်ကိုယ်တိုင်ထဲတွင်ရှာတွေ့ပါလျှင် ရောမမြို့, သငျသညျမှနျသှားနိုငျ Hydromania ရေကိုပန်းခြံ. ရုံရောမမြို့ပြင်ပတွင်, ဒါဟာဆလိုက်နဲ့ရေပျော်စရာများစွာသောလူကတိပေးထား, အရာလေးတွေထိုသို့စုံလင်သောစေသည်.
အင်္ဂလန်မှာကလေးတွေအတွက်အဓိကဆွဲဆောင်မှုတ Warner Bros ဖြစ်ပါသည်. စတူဒီယို ဟယ်ရီပေါ်တာ၏ချမှတ်ခြင်း အတွင်းလှည့်လည် လန်ဒန်. သို့သျောလညျး, ၏အံ့ဘွယ်သောအမှု၌စိတ်ဝင်စားငယ်ရွယ်စူးစမ်းရှာဖွေသူများများအတွက် သဘာဝ, လန်ဒန်ရဲ့သဘာဝသမိုင်းပြတိုက် ပြတိုက် အလွန်ကြီးစွာသောရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသည်. သူတို့ကဒိုင်နိုဆောနှင့်ပတ်သက်ပြီးလေ့လာရန်နိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာဆိ-ဖော်ရွေသက်သေခံပစ္စည်းများကိုအများအပြားရှိပါတယ် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးစနစ်က. ဒါဟာအကြီးဖွင့် အတှေ့အကွုံ ထိုသို့သွားရောက်ခြင်းလန်ဒန်တန်ဖိုးရှိစေသည် မိသားစုများ.
အမ်စတာဒမ် များသောအားဖြင့်တစ်မိသားစု-ဖော်ရွေအဖြစ်အကြံပြုသည်မဟုတ် ခရီးလမ်းဆုံး, သို့သော်သူကထိုလမ်းမဖွစျနိုငျဟုမဆိုလိုပါ. ကလေးတွေအဘို့, ဖြစ်ကောင်းအများဆုံးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်တည်နေရာဖြစ်ပါသည် Natura Artis Magistra သို့မဟုတ်အနုပညာရှင်တွေ. အဲဒါပါပဲ အကြီးစားတိရစ္ဆာန်ရုံတစ်ခုငါးမွေးကန်နှင့်အတူပြည့်စုံ, ကစားကွင်း, သတ္တဗေဒပြတိုက်, နှင့် planetarium. ဒါဟာထက်ပိုတပ်ဆင်ထား 900 တိရိစ္ဆာန်မျိုးစိတ်!
တစ်နည်းအားဖြင့်, သငျသညျ Kaatsheuvel အတွက် Efteling ဦးနိုင်ပါတယ်. ဒါဟာဖြစ်ပါသည် အကြီးမားဆုံးဆောင်ပုဒ်ပန်းခြံ နိုင်ငံထဲမှာ, တစ်စိတ်ကူးယဉ်ဆောင်ပုဒ်နှင့်ဒဏ္ဍာရီနှင့်ဒဏ္ဍာရီအပေါ်တစ်ဦးအာရုံနှင့်အတူ. အများအပြားစီးနှင့်ဆုမွန်ကောင်းနေသောလေးတွေများအတွက်ဖျော်ဖြေရေးရှိပါတယ် ဒဏ္ဍာရီပုံပြင်များ.
ဘယ်အချိန်မှာကလေးတွေအဘို့အဖျော်ဖြေရေးမှကြွလာ, ဘယ်လ်ဂျီယံ ၎င်း၏ဆောင်ပုဒ်ပန်းခြံကမ်းလှမ်း, Plopsaland. ဒါဟာရောင်စုံင်, roller Coaster နှင့်ကစားကွင်းနှင့်ပြည့်ဝ၏, သည်သူငယ်ကိုခံစားရန်အဘို့အ themes များအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်. ဒါဟာအစနှင့်အတူလယ်ယာရှိပါတယ် ကလေးတွေသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည့်တိရိစ္ဆာန်များ, အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်ပြဇာတ်ရုံနဲ့ လှေစီး.
Antwerp De ပန်းမှရထား
ကလေးတွေအဘို့အအကျော်ကြားဆုံးဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုမှာခြော Disneyland ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာအတွက်တဦးတည်းထက်မဆိုပိုမိုကောင်းမွန်ရပါဘူး ပဲရစ်. ဒါဟာအကြောင်းပြချက်များအတွက်ဥရောပသားအပေါင်းတို့အတွက်ရေပန်းအစားဆုံးဆောင်ပုဒ်ပန်းခြံင်. ငါးရေးရာဒေသများရှိပါတယ်, အဖြစ်အများအပြားစီးနှင့်ဆွဲဆောင်မှု. သူတို့ထဲကတချို့က Parc Asterix ပါဝင်သည်, ကာရစ်ဘီယံ၏ပင်လယ်ဓားပြ, Buzz Lightyear လေဆာပေါက်ကွဲမှုနှင့်ဒါဟာအသေးစားကမ္ဘာ့ဖလားင်. ကလေးတွေနှင့်အတူပဲရစ်စ်နှင့်ပြင်သစ်မှတစ်ဦးအလည်အပတ် Disneyland မပါဘဲပြည့်စုံသည်မဟုတ်.
သင့်ရဲ့တစျခုလုံးကိုမိသားစုနှင့်အတူတစ်ဦးမမေ့နိုင်သောအားလပ်ရက်ရှိသည်ဖို့အဆင်သင့်? အဆိုပါအချို့ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု5ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းထဲကဥရောပမှာလေးတွေများအတွက်အကောင်းဆုံးဆွဲဆောင်မှု, သငျတို့သတဲ့ပေါက်ကွဲမှုရှိသည်လိမ့်မယ်. သင့်ရဲ့အားလပ်ရက်စီစဉ်ဖို့သေချာပါစေနှင့် သင့်ရဲ့ရထားလက်မှတ်တွေစာအုပ်ဆိုင် အချိန်မှန်!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေ ဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးပေး, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-attractions-kids-europe%2F%3Flang%3Dmy- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml သငျတို့သ / ကြောင်းနှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများမှ / pl အဆိုပါ / က de ပြောင်းလဲခြင်းသို့မဟုတ်နိုင်ပါတယ်.
#ဆွဲဆောင်မှု #traveleurope europetrains europetravel eurotrip ရထား ရထားခရီးသွား ရထားခရီးစဉ် travelbelgium eng travelfrance travelitaly netရာဝတီ traveltips
Eco ခရီးသွားအချက်အလက်များ, ရထားခရီးသွားခြင်း, ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ရထားခရီးသွားတရုတ်, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ဥရောပခရီးသွား